10 Best Parks Umxholo EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Best Parks Umxholo EYurophu
Ixesha lokuFunda: 8 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 08/01/2021)
Olunye lweeholide zosapho ezonwabisayo luya kuhambo oluchulumancisayo ukuya kwezinye zeepaki zemixholo ephambili eYurophu. Kuphela eFrance, uya kuba 3 iipaki zemixholo emangalisayo, kwaye sikhethe ngesandla i 10 eyona parks imixholo eYurophu uhambo lwakho losapho elandelayo. Ukukhwela kweyona rollercoaster ilungileyo kwihlabathi, amahlathi amnandi, imihlaba yomlingo, Iifani, kunye nokuhamba kwexesha, ndikulindile, ukusuka eFrance ukuya e-Austria nase-UK.
izithuthi kaloliwe yeyona ndlela indalo ahambe. Eli nqaku yabhalwa ukuba afunde Train Travel kwaye yenziwa yi Gcina A Isitimela, Amatikiti oololiwe abiza kakhulu eYurophu.
1. Ipaki yaseYurophu kwiRust yaseJamani
Eyona paki inkulu eJamani, Ipaki yemixholo ye-Europa ingaphezulu kwe 100 iindawo ezinika umdla zotyelelo. I-Europa-Park yeyona paki yesibini ithandwayo eYurophu, emva kweDisneyland eParis. Ukuba abantwana bakho bayazithanda ii-rollercoasters, ke baya kudubula kwi 13 rollercoasters epakini.
Ukuba uceba uhambo oluya eStrasbourg, ke kuya kufuneka ucwangcise ubuncinci 2 Iintsuku ze-Europa-Park. This is due to the number of exciting attractions already mentioned, kunye nemiboniso eyongezelelweyo emnandi. The youngest will enjoy an enchanting elf ride, kunye nokujikeleza kweBig-Bobby-Car kubaqhubi abanomnqweno wokubaleka, Ngelixa abantwana abadala kunye nabazali beza kubethwa ngumoya weBlue Fire Mega kwilizwe lase-Iceland.
Ngaphezu, ukuba ngenene uceba utyelelo olude, emva koko unokuhlala kwenye yeehotele ezikwisiza. Ngale ndlela unokwenza olona tyelelo lwakho eYurophu-Ipaki, kunye namava kuzo zonke iindawo ezinomxholo: Ukusuka e-Adventureland e-Afrika ukuya kwihlathi lase-Grimm's Enchanted.
Ufika njani kwi-Europa-Park?
I-Europa-Park imalunga 3 iiyure ukusuka eFrankfurt, kwaye unokufikelela kuyo nge zokuhamba train ngaphesheya kweJamani ukuya eRingsheim. ke, Unokuqesha imoto okanye ukudlulisa ibhasi.
Cologne ukuya eFrankfurt ngoololiwe
EMunich ukuya eFrankfurt ngoololiwe
IHanover iya eFrankfurt ngoololiwe
IHamburg ukuya eFrankfurt ngoLoliwe
2. Disneyland eParis France
Mhlawumbi yeyona paki yomxholo idumileyo kuthi 10 iipaki zemixholo ephambili kuluhlu lwaseYurophu, Disney e Paris yeyona nto uyithandayo kubakhenkethi bayo yonke iminyaka. Abalinganiswa abathandekayo abavela kumabali ethu eDisney abathandayo, kutsala izigidi zabakhenkethi minyaka le.
I-Disneyland kwidolophu yaseChessy, e France. Ikhaya leWalt Disney studio kunye nepaki yezokhenketho, apho ungangena inyani, kwaye onke amaphupha akho obuntwana azaliseka. Ihlabathi leWalt Disney liza ebomini, kumtsalane omangalisayo, kwaye ibonisa njenge-labyrinth ka-Alice kunye nomboniso we-4D kaMickey.
Ungawandisa lo mlingo kwimpelaveki yonke, kwaye uhlale kwiihotele zeDisney, okanye iihotele zamaqabane ezisisiphatho simahla kude neDisneyland.
Ufika njani kwiDisneyland?
I-Disneyland ilungile 20 imizuzu ukusuka eParis. Unokufika apha ngokuthe ngqo ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseParis, okanye isikhululo sikaloliwe iMarne-la-Vallee / Chessy.
3. IViennese Prater Theme Park eOstriya
IPrater Wien yeyona paki inomxholo ubalaseleyo e-Austria, kunye nenye 10 iipaki eziphambili zeYurophu. Usapho lwakho luya kuba nexesha elimangalisayo kwii-rollercoasters ezininzi zasendle, kunye nenyani yokwenyani, njengoGqr. U-Archibald.
Ukwengeza, kukho iinqwelo zokuhamba, iinqaba ezinqabileyo, kwaye ukongeze konke, Isondo elikhulu likaFerris eOstriya. Ivili elikhulu likaFerris livulekile unyaka wonke kwaye lelinye lalo Iimpawu eziphambili zeVienna.
Ufika njani ePaki yoMxholo wePrater yaseVienna?
Umvelisi Ipaki yokonwabisa imi kwisithili seVienna sesi-2, kwaye ungayifumana ngeteksi okanye indlela engaphantsi ukusuka kumbindi wesixeko.
4. IGardaland e-Itali
Njengoko unokuthelekelela, IGardaland imi kufutshane neLake Garda e-Itali. Njengepaki yemixholo ebekwe kufutshane namanzi, Ipaki yemixholo yeGardaland inezinto ezininzi zokukhwela amanzi, njengesikhephe saseColorado, kunye ne-jungle rapids.
Ukwengeza, IGardaland ikwanendawo yokuphila ubomi elwandle, of 13 iindawo ezinezihloko, yaye 100 iintlobo. Akukho mathandabuzo, abantwana bakho baya kuba umdla ngokupheleleyo phantsi kolwandle, kwaye ngekhe ufune ukuhamba.
Okuphikisanayo, ukuba konke malunga neadrenaline, then you’d love the thrilling Blue Tornado rollercoaster.
Uyifumana kanjani iGardaland Theme Park?
Ungathatha uloliwe waseTrenitalia ukusuka eVenice ukuya kwisikhululo sePaschiera del Garda, emva koko saya eSardland.
5. Ipaki ye-Efteling Netherlands
Ipaki yemixholo ye-Efteling yenye yeefayile ze- 10 iipaki eziphambili zeYurophu. Iintsomi sonke esikhulele kuzo siphila kwindawo ezinomtsalane ze-Efteling kunye nehlathi elinomtsalane, ukusuka kuHans Christian Andersen ukuya kubazalwana uGrimm.
IFata Morgana izakusa eMpuma Ekude nakwimihlaba yamaSultan, Ngelixa ii-coasters zamanzi kunye nee-coasters zomphunga ziya kukuthatha ngaphaya kwamaphupha akho amnyama. Ilizwe leefiriyinti lilindele wena a ride umkhumbi ebumnyameni kwaye engaqondakaliyo iDroomvlucht.
Akukho magama anokwanela ukuchaza umlingo wepaki yomxholo we-Efteling yosapho lonke, ke kufuneka wenze ixesha lale paki yomxholo kwiholide yakho eNetherlands.
Ufika njani kwiPaki yoMxholo we-Efteling?
Ungathatha uloliwe ukusuka eAmsterdam ukuya e ’s-Hertogenbosch, kwaye emva koko ibhasi ngqo kwi-Efteling theme park.
6. ILegoland Theme Park eWindsor UK
Xa zonke izinto ezinomtsalane zenziwe ngokupheleleyo, Le paki yomxholo yenye iparadesi yabantwana. Ipaki yomxholo weLegoland eWindsor yenzelwe abantwana abajikeleze inkqubo yokudlala yeLego.
ngoko ke, yonke i-rollercoaster, isikhephe, kwaye uloliwe wenziwe ngamaqhekeza amakhulu e-lego. Le paki inomxholo omangalisayo eNgilane ibekwe eBerkshire kunye nesiqingatha seyure ukusuka eLondon.
Ufika njani kwiLegoland Theme Park eWindsor?
Kuya kufuneka uthathe uloliwe ukusuka eLondon Paddington ukuya eWindsor & Eton Central ngonxibelelwano, okanye uloliwe othe ngqo ovela eLondon Waterloo. ke, kukho iibhasi ezirhabaxa ukusuka kwisikhululo sikaloliwe ngasinye ukuya eLegoland.
7. I-Asterix Theme Park eFrance
Kwimeko apho ungazi, I-Parc Asterix isekwe ku-Albert Uderzo kunye no-Rene Goscinny owaziwayo woluhlu lweencwadi ezihlekisayo, I-Asterix. ngoko ke, isondele kwi 2 abatyeleli abazizigidi bonwabela imimangaliso yepaki yesibini enkulu eFrance. Eyokuqala kunjalo iDisneyland yomlingo.
Kwipaki yomxholo we-Asterix ungayifumana i-Discobelix enkulu kwaye ube nexesha elimnandi lokujikeleza, Dibana neehlengethwa kunye nezinye izilwanyana kwilali yaseGaulois, kwaye ke wonwabele ezinye izinto ezinomdla.
Ufika njani kwiPark Asterix?
Ipaki yemixholo ye-Asterix kuphela 30 Imizuzu ukusuka eParis kumgca B kuloliwe weRER usuka eParis Gare du Nord. Emva koko uyehla eCharles de Gaulle 1 Airport, kwaye uye kwisiphekepheke.
8. Ipaki yeFuturoscope eFrance
Ukudanisa ngeerobhothi, ukuhamba ixesha, kwaye uhambe uye kwi 4 iimbombo zomhlaba phezulu, Ipaki yemixholo yeFuturoscope iphume kweli hlabathi. Le paki yemixholo imangalisayo ikwindawo entle yeNouvelle-Aquitaine eFrance.
I-Futuroscope idibanisa izinto ezinomdla kunye nesayensi kwaye iya kuba mnandi kunye namava emfundo kusapho lonke.
Ufika njani kwiPaki yoMxholo wePuturoscope?
Unokufika kwipaki yemixholo engaqhelekanga ye-Futuroscope nge-Eurostar ukuya eLille okanye eParis, kwaye utshintshe kwi-TGV.
EParis ukuya eRouen ngoLoliwe
EParis ukuya eLille ngoLoliwe
Rouen ukuya eBrest ngololiwe
Rouen ukuya eLe Havre ngololiwe
9. I-Chessington World Of Adventures Umxholo wePaki e-UK
I-Chessington World of Adventures e-UK yipaki ene-safari. Oku kuthetha ukuba nakuphi na ukutyelela usapho epakini yokonwabisa iChessington kujika kube yindawo yolonwabo yosapho kwilizwe eliyimfihlakalo nelithandekayo lezilwanyana zasendle nakwiAfrika iphela..
Ukongeza kwiihambo zasendle, ungakonwabela ukulala e-Safari nase-Azteca iihotele ezinomxholo, kwaye wandise ukuhlala kwakho. ke, ukuba ukwi adventures zasendle, uya kuba nexesha elimangalisayo ukunqumla ipaki kubalindi behlathi, Iliwa lengwe, kunye nemilambo.
I-Chessington world of adventures yenzelwe usapho olunomdla, kwaye ubophelelekile ukuba ube nexesha lobomi bakho.
Ufika njani kwiChessington World Of Adventures?
Ipaki yemixholo yasendle iChessington 35 imizuzu ukusuka kumbindi weLondon ngololiwe. ke, ungathatha uloliwe wase Mzantsi-Ntshona ukusuka eWaterloo ukuya kwisikhululo saseChessington South.
10. IFantasialand Theme Park eJamani
KwiFantasialand zonke iingcinga zabantwana ziyazaliseka 6 imihlaba emihle. Kuwo wonke umhlaba, ungonwabela ezona zinto zikhwele kumnandi, kunye nokukhanya kokukhanya kunye nombala.
ke, Yintoni eyenza iFantasialand yenye yeepaki zemixholo ephambili eYurophu? Idolophu yase China, Mekhsikho, Afrika, Berlin, Idolophu yaseWuze, imfihlakalo ubukumkani, naseRookburgh, ngomtsalane omangalisayo kwihlabathi lonke. Ukusuka kwiMamba emnyama ukuya kwiTaron edumileyo, oku kukhwela kuya kukuvuthela.
Ufika njani kwiFantasialand?
Ungathatha isiphekepheke kwisikhululo sikaloliwe saseBruhl. Fantasialand ibekwe eBruhl, nje 2o imizuzu ukusuka Cologne.
Ukushwankathela olu lonwabo, Iingqondo eziqaqambileyo zaseYurophu zidale ezona mxholo mhle kakhulu weepaki emhlabeni. Nokuba uhamba nabantwana abancinci okanye uthatha abantwana abadala ukonwabisa, i 10 Iipaki zemixholo ezilungileyo kuluhlu lwethu zinomtsalane obalaseleyo kuyo yonke iminyaka.
Apha e Gcina uloliwe, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo lwakho oluya e “10 Best Parks Umxholo EYurophu”.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog "10 Best Parks Umxholo EYurophu" kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-theme-parks-europe%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)